War cusub oo kasoo baxay madaxweyne FARMAAJO - Caasimada Online
Home Warar War cusub oo kasoo baxay madaxweyne FARMAAJO
War cusub oo kasoo baxay madaxweyne FARMAAJO
Muqdisho (Caasimada Online) – Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdaullaahi Farmaajo ayaa qoraal uu soo dhigay bartiisa twitter kusoo dhoweeyay tallaabo muhiim u ah Soomaaliya oo ay qaaday hay’adda lacagta adduunka ee IMF.
IMF ayaa maanta shaaca ka qaaday inay soo geba gebeysay wajigi kowaad ee barnamaij dib u eegis loogu sameynay hanaanka maaliyadda Soomaaliya, kaasi oo guul ku dhammaaday.
Madaxweynaha ayaa yiri “Dowladeena waxaa ka go’an inay Soomaaliya horey usii dhaqaajiso, waxaan soo dhoweynayaa qoraalka kasoo baxay IMF ee wanaagsan, kuna saabsan habka maaliyadda dalkeena.
Madaxweynaha ayaa sheegay in hadalka IMF uu astaan u yahay in dadaalka dowladda iyo ballan-qaadyadii ay sameysay ay mira dhalayaan.
“Waxaan sii kordhin doonaa dadaalkeena ah inaan guul ku hoggaamino shacabka Soomaaliya”
Hadalka madaxweynaha ayaa imanaya ayada oo mooshin ay kasoo gudbiyeen xildhibaano ka tirsan baarlamanka Soomaaliya oo doonaya in xilka laga qaado, kaasi oo hadda 14 xildhibaan ay sheegeen in magacooda looga been abuurtay.
Dhinaca kale, warka IMF ayaa guul weyn u ah dowladda oo xildhibaan horey ay ugu eedeeyeen musuq-maasuq, taasi oo u muuqata in IMF aysan ku raacsaneyn.